Nomera majika ao Shina, fantatrao ve izany? | Vaovao momba ny dia
Nomera majika ao Shina
Maria Jose Roldan | | Shina, Fitsangatsanganana any Azia
Ny olona tsirairay dia manana isa tiana, na isa izay mahatadidy zavatra manan-danja amin'ny fiainan'ny olona. Fa ho an'ny kolontsaina sasany, ny isa dia mihoatra ny tarehimarika fotsiny, izy ireo dia mety ho mariky ny vintana., tandindona mampitombo ny vintana tsara na ny mifanohitra amin'izay fotsiny.
Ohatra, any Chine dia 8 ny isan'ny mazika. Fa inona no ananan'ny isa 8 izay tsy ananan'ny isa hafa? Angamba io no endriny, satria raha apetrakao marindrano ny isa 8 dia lasa mariky ny tsy manam-petra izany. Tandindona tena lehibe ho an'ny maro ary koa ho an'ny Sinoa.
Fa raha te hahalala ny antony ananan'i Shina isa majika ianao ary maninona no isa io fa tsy isa hafa, dia tohizo hatrany ny famakiana satria ho liana amin'ny zavatra rehetra holazaiko anao ianao. Angamba taty aoriana aorian'io dia horaisinao ho majika ho anao ihany koa io isa io.
1 Ny isa majika any Shina
2 8 Aogositra 2008
2.1 Amin'ny lalao olimpika
2.2 Vehivavy bevohoka te hanan-janaka
2.3 Mpivady maro no nanambady
3 Ny majika an'ny 8
4 Ny isa 9 dia manan-danja ihany koa
Ny isa majika any Shina
Sina dia firenena manana kolotsaina sy tantara maro ao ambadik'izany. Mila manisa ireo tsangambato taloha rehetra ananany ianao ary ahoana ny fananana fivavahan-drazana izay mitohy mandraka androany.
Fa tahaka ny ananan'izy ireo tantara lehibe dia kolontsaina iray koa izay mino be loatra amin'ny finoanoam-poana. Ny olona ao amin'ny kolontsaina sinoa dia mahatsapa fa manana herin-kery lehibe ny finoanoam-poana ary tsy tokony holavina. Inona raha misy izy ireo dia natao ho an'ny zavatra iray ary izany no antony tsy maintsy hajaina sy raisina am-po ao amin'ny fiainan'ny olona.
8 Aogositra 2008
Tamin'ny 8 Aogositra 2008, izany hoe 08.08.08, fahatsapana hafa no nifohazan'ny mponina rehetra ao Shina, ankoatry ny Lalao Olaimpika, nahatsapa fahatezerana tsy azo faritana izy ireo.
Zavatra maro no nitranga androany tao Shina izay misy ifandraisany amin'ny isa valo ary amin'ity andro tsy azo averina ity ho azy ireo. Te-hahatsiaro ny 08.08.08/XNUMX/XNUMX ny Sinoa ho andro manandanja indrindra amin'ny fiainany, ary izany no antony nisehoan'ny zavatra tsy mahazatra.
Amin'ny lalao olimpika
Ny isa 8 dia noheverin'ny kolontsaina sinoa ho isa isaina maneho ny vintana, mirary soa. Izany dia satria amin'ny fiteny mandarin ny isa 8 dia toa "ba" ary tena mitovy amin'ny fomba fanononana azy "enrichment". Izany no antony fa ny Lalao Olaimpika dia notokanana tamin'ny 8 Aogositra 2008 tamin'ny 8 ora alina, 8 minitra ary 8 segondra. Tsy maintsy tonga lafatra ny zava-drehetra!
Vehivavy bevohoka te hanan-janaka
Na izany aza, tsy io irery no fetran'ny Sinoa momba ny isa 8. Any amin'ny hopitaly, vehivavy maro bevohoka no nangataka tamin'ny dokoterany mba hiteraka azy ireo na hanao fizarana cesarean amin'io andro io ihany mba hahafahan'ny zanany teraka amin'ny andro mirary soa. Saingy toa ny miharihary, noho ny fanirian'ny bevohoka maro ny hahaterahan'ny zanany tamin'io andro io, tsy nanaiky ny fangatahan'izy ireo ny dokotera satria tsy zavatra ara-dalàna ny fanatanterahana izany.
Mpivady maro no nanambady
Saingy toy ny hoe tsy ampy izay nolazaiko hatramin'izay, tokony marihina fa mpivady Pekingese maro, maherin'ny 16.400 XNUMX no nanambady tamin'io andro io. Ny tanjona dia ny hisehoan'ny daty 08.08.08 ao amin'ny taratasim-panambadiany, zavatra izay noheverin'ireo mpivady fa tsy isalasalana fa hitondra vintana betsaka amin'ny fiainam-panambadiany.
Mba hahafahan'ny mpivady rehetra maniry hanambady amin'izao andro izao ny distrika fisoratana anarana ao amin'ny distrikan'i Beijing (Chaoyang, Haidian, Dongcheng, Xicheng, Chongwen, Xuanwu, Fengtai ary Shijingshan) Nanokatra ny biraony izy ireo tamin'ny adiny 12 izay tsy latsaky ny enina maraina ka hatramin'ny enina tolakandro.. Nisy koa mpiasa fanampiny hanatrika ny fangatahana rehetra na ara-batana na amin'ny Internet. Ka ny mpivady te hanambady amin'io andro io dia afaka manao izany haingana ary tsy misy sakantsakana.
Ny majika an'ny 8
Azonao atao ny milaza fa ny 8 no isa majika ho an'ny Sinoa, saingy toy izany koa ho an'ny olona maro izay mieritreritra fa ny 8 dia tandindon'ny tsy manam-petra ary io isa io dia mety hidika izay tian'ilay olona holazaina. 8 no isan'ny vintana tsara ho an'ny maro ary tsy isalasalana fa majika ho an'ny Sinoa.
Amin'ny fanandroana sinoa dia misy famantarana 8, ao amin'ny governemantany misy minisitra imperial 8, manana teboka kardinaly 8 izy ireo ary koa misy tendrombohitra cosmic 8 manan-danja aminy. Betsaka ny olona manandrana manana ny isa 8 eo amin'ny fiainany ka amin'izany fomba izany dia afaka mahazo harena bebe kokoa amin'ny fiainany izy ireo.
Ny isa 9 dia manan-danja ihany koa
Ny sinoa tranainy dia nihevitra ny isa ho toy ny mistika eo amin'izao rehetra izao. Satria ny isa dia hafahafa toy ny 9, dia ho an'ny sokajy "yang" maneho ny tanjaka sy ny maha-lehilahy. Any Sina fahiny ny isa 1 dia maneho ny isa fanombohana, raha ny isa sivy kosa dia maneho ny tsy manam-petra sy ny faratampony, izany no hita koa ny isa 9 amin'ny lafiny maro amin'ny fiainana any Sina. Ohatra, ao amin'ny lapan'ny mpanjaka na any amin'ny monasitera, ny varavarana, ny varavarankely, ny tohatra na ny kojakoja izay nisy dia sivy marobe na isa misy 9 foana.
Ho an'ny sinoa, ny isa mitovy dia an'ny sokajy "ying" ary ny isa hafahafa an'ny "yang". Ny Sinoa dia mazàna mahita ny fiainana amin'ny diametrika. Ka rehefa misy fiovana mitranga amin'ny fiainana dia matetika no fiovana avy amin'ny mifanohitra aminy. Ny marika toy ny 9 izay manondro ny rantsambatana amin'ny kolontsaina sinoa dia fampitandremana ihany koa, teboka iray tokony hodinihina mba hianarana, hitombo, hateraka indray, hanovana ary hanova.
Amin'ny kolontsaina sinoa nentim-paharazana, ny isa sivy dia misy dikany lehibe koa. Ohatra iray hafa koa ny andro fahasivy amin'ny volana fahasivy dia fetibe tena lehibe ao Shina. Izy io dia ilay festival fantatra amin'ny hoe Fetin'ny Yang.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Shina » Nomera majika ao Shina
Tanàna lehibe eto Albania
10 amoron-tsiraka manga lehibe ao Espana